Clamps Factory, na-eweta - China clamps Manufacturers
Waya Pipe nko
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị waya anwụrụ nko na-natara a ukwuu nke na-ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Na vinyl-ntekwasa ls dị.
UPC Plastic tube mwekota
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic tube clamps bụ UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ha dị na ụdị ọkọlọtọ ma ọ bụ plenum-nchekwa ụdị.
DWV Pipe Hanger ji mee ihe iji kwụnye kọpa ọla kọpa site na ihe
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị DWV anwụrụ hanga nwere ike inye ngwa ngwa echichi. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, kpochidoro ịghasa nwere ike na-anwụrụ ala structurally.
Plastic tube mwekota
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic tube clamps dị na ọkọlọtọ ma ọ bụ plenum-mma ụdị. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ọkwa ndị nwere ụdị v na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịtinye tubụ.
UPC Kwadoo ABS Corrosion Gosiri J-nko
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị J-nko bụ UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ọgịrịga abụọ imepụta na-eme ka mbọ aka na-ebugharị n'oge njem.
Light Ọrụ U-eriri
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ìhè ọrụ u-straps natara a ukwuu nke ewu ewu na gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ntu nko mere maka 1/2 ″ x 3/4 ″ CTS ọkpọkọ. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America.
Igba Iron Pipe mwekota Ndenye mwekota na kpaliri elu
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị igba ígwè anwụrụ mwekota ngwa mwekota na galvanized elu natara a oké ewu ewu na gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Light Ọrụ U-eriri (Ọla kọpa tubing)
natara nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Esorowo nkedo Iron Pipe mwekota Ọla kọpa plated
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị esorowo nkedo ígwè anwụrụ clamps e mere maka nkwusioru nke ọla kọpa tubing. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Ọla kọpa-plated Pipe hanga Strap
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi ụlọ ọrụ kachasị asọmpi, ihe nkwụnye ọla edo anyị ejiri ọla kọpa enweta nnukwu ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Na ha bụ ọla kọpa plated na nwetụ 1/4 ″ na 3/16 ″ oghere rụrụ.
UPC Plastic 90 Celsius Suspension Mwekota fastener
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic 90 Celsius nkwusiochi mwekota fasteners na-UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ọgịrịga ha na-ekwe ka ọkpọkọ na-efegharị nwayọ nwayọ ma nwayọ nwayọ mgbe ọkpọkọ ahụ na-abawanye ma na-emebe iwu.